Fahaizana teny vahiny : 11 nifaninana nikabary tamin’ny teny japoney | NewsMada
Fahaizana teny vahiny : 11 nifaninana nikabary tamin’ny teny japoney
Notontosaina ny alahady teo, tetsy amin’ny hotely Panorama eny Andrainarivo, ny fifaninanana mandaha-teny na mikabary amin’ny teny japoney. Izany dia karakarain’ny masoivoho japoney eto amintsika miaraka amin’ny fikambanan’ny mpampianatra teny japoney sy ny fikambanana Sakura. Efa andiany faha-25 ny natao tamin’ity taona ity.
Niisa 11 ny mpandray anjara ary nizara sokajy telo : ireo vao manomboka amin’ny fianarana teny japoney, ireo efa mahay ary ireo manana traikefa tamin’ny fianarana tany Japon. Samy nojeren’ny mpitsara avokoa ny fahaiza-manonona, ny fomba fiteny ary ny fahazoana ny teny japoney.
Tsara ny manamarika fa, taorian’ny lahateny isaky ny mpifaninana, nametraka fanontaniana tamin’izy ireo ny mpitsara ary notsaraina ihany koa ny fahaizany mamaly amin’ny teny japoney. Taorian’ny fisafidianana ireo lahateny tsara indrindra àry, notoloran’ny ambasadaoro japoney, Ryuhey Hosoya, « certificats » ireo nandrombaka ny laharana voalohany sy faharoa.
Raha ny nambaran’ny tompon’andraikitra ao amin’ny masoivoho japoney eto amintsika, maherin’ny 1.500 ny Malagasy mianatra ny fitenin’izy ireo amin’izao fotoana izao. Izany hoe, isika no voalohany aty Afrika, raha io isa io no jerena. « Ilaina ny fifanakalozana ara-kolontsaina, toy izany, hanatsarana ny fifandraisana eo amin’ny tany roa tonta », hoy ny ambasadaoro japoney. Nialohavana fampianarana sy fanehoana « origami », ilay zavakanto japoney mifototra amin’ny fahaiza-mamoritra taratasy, ny lanonana natao ny alahady teo.